Iindlela zorhwebo zikaNyaka zika-2014 zeHolide yeNtlalo | Martech Zone
Iindlela zorhwebo zikaNyaka zika-2014 zeHlabathi zeNtengiso
NgoMgqibelo, Septemba 27, 2014 NgeCawa, ngoSeptemba 28, 2014 Douglas Karr
Kubonakala ngathi eli iya kuba lixesha elikhulu leeholide kuFacebook, apho 92% yabathengisi balindele ukuchitha uninzi lwabiwo-mali lwabo lwentengiso! Ngokupheleleyo, abathengi kulindeleke ukuba bachithe i-8% ngaphezulu kulo nyaka kunokuba bebewenzile kunyaka ophelileyo- $ 650 yezigidigidi. Kwaye abathengisi bajonge intlalo njengeyona nto iphambili yokwandisa intengiso yabo!
Ixesha lokuthengisa ngeeholide lika-2014 selifikile! Ukuba ufana nathi, sele ugcwele ngokupheleleyo ucwangcisa imikhankaso yakho yeholide. Ke kutheni ungathathi inyathelo ubuye umva kwaye ujonge ukuba zeziphi ezinye izinto abathengisi abazicingayo ngeli xesha leeholide kwezentlalo? Funda apho abathengisi batyala imali, zeziphi iinethiwekhi ezikhulayo njengabadlali bamandla, zeziphi iinjongo zentengiso eziphambili kwezentlalo nangaphezulu. URob Manning, u-Offerpop
I-Offerpop isebenzisa le infographic ukukhaba inkqubo entsha ye-imeyile apho abathengisi banakho sayina kwaye ufumane inkuthazo yokuthengisa ngamaxesha athile kwi-inbox. Uthotho lomxholo wasimahla luya kubonelela ngeengcebiso zedijithali nezasentlalweni kunye neendlela ekufanele ukuba uzazi ngoLwesihlanu omnyama nangaphaya. Fumana i-infographics, iingxelo zophando, izicwangciso zokuthengisa, jonga iincwadi, kunye nokunye, unyaka wonke.
tags: iingcebiso zokubuyisa ezidijithaliintengiso ye-ecommerceuphando lwezorhweboiingcebiso nge-imeyileiingcebiso zeholideiindlela zeholideunikezeloukuphangaiingcebiso zentengiso yemidiya yoluntuiingcebiso zentlalo
Njani abathengisi njengawe ukhetha uMboneleli weNtengiso oZenzekelayo?